Villa Soomaaliya oo War kasoo saaratay Shirkii Xalane ee la sheegay inuu Burburay | HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Villa Soomaaliya oo War kasoo saaratay Shirkii Xalane ee la sheegay inuu...
Villa Soomaaliya oo War kasoo saaratay Shirkii Xalane ee la sheegay inuu Burburay
Madaxda dowlada federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa shir labo maalin socday waxa ay ku yeesheen teendhada Afisiyooni, shirkan oo ahaa mid horu dhac ah ayaan kasoo bixin wax go’aano ah.
Shirka u dhaxeeyay Madaxda DF iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa lagu wadaa in maanta mar kale dib uga bilowdo teendhada Afisiyooni ayna madaxda kasii doodaan ajandayaasha shirweynaha soo socda.
Cabdirashiid Maxamed Xaashi Agaasimaha Xafiiska Warfaafinta & Xiriirka Warbaahinta Madaxtooyada Soomaaliya, ayaa meesha ka saaray in shirka ay yeesheen Madaxda DF iyo kuwa maamul goboleedyada uu bur buray .
Waxa uu sheegay Agaasimaha in kulamada madaxda ay wali sii socdaan si looga fogaado khilaaf, waxa uuna cadeeyay in muhiim tahay in wax shuruud ah aan lagu xirin heshiiskii doorashada ee gaareen madaxda DF iyo kuwa maamulada 17-ka September 2020 .
“Kulamada ay madaxdu yeelanayeen weli waa ay socdaan, mana burburin, waxa ay u ballansan yihiin in lasii wado wadahadalka, si aan khilaaf u imaan waxaa muhiim ah in laga dheeraado wax shuruud ah oo lagu xiro heshiiska 17-ka September 2020 oo madaxdu wada saxiixeen & Baarlamaankuna aqbalay” Sidaasi waxaa yiri Agaasime Cabdirashiid.
Shirka Teenadhada Afisiyooni oon horey wax natiijo ah uga soo bixin ayaa la filayaa in maanta mar kale madaxda Dowlada iyo kuwa maamul goboleedyada isugu yimaadaan , waxaana aad u yar in xogo rasmi ah laga helo shirkan oo warbaahinta loo ogoleen
Previous articleMadaxweyne Qoorqoor oo safar degdeg ah kusoo gaaray Dhuusamareb
Next articleShirkii Teendhada Afisyooni oo madaxweyne QoorQoor Dartiis mantay Ubaaqday